Familjeåterförening – somaliska
Waa suurtagal in adiga xaq u leedahay inaa qoyskaada keensatid haddii aad heshay ruqsada degnaanshada joogtada, ama ruqsada degnaanshada ku meelgaarka oo magangelyodoon tahay ama dadka difaaca u baahan, ama lagu tarxiilikarin ama xaalada qaas kuu ah jirto, iyo la qiimeeyay in lagu siindoono ruqsada degnaanshada oo muddo dheer haysaneysid.
Waxaa jiro shuruud oo in adiga qoyskaada masruufankartid iyo haysatid guriga ilaa heer anfacisa yahay. Shuruudan xaalado eysan quseyn baa jiro.
Yaa xaq u laahan­karo qoys dib u mideynta?
Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan haddii adiga
haysto ruqsada degnaanshada joogtada
haysto ruqsada degnaanshada ku meelgaarka oo magangelyodoon ama dadka difaaca u baahan iyo la qiimeeyay in la siindoono ruqsada degnaanshada oo muddo dheer
haysatid ruqsada degnaanshada ku meelgaarka oo sabab u tahay in lagu tarxiilikarin ama arrin qaas, iyo la qiimeeyay in la siindoono ruqsada degnaanshada oo muddo dheer.
Qoys midoobida oo quseyso adiga haysto ruqsada degnaanshada ku meelgaarka
Haddii qoyskaada ey haystan fursad ey kuugu imaadan iyo kula nooladan adiga oo haysto ruqsada degnaanshada ku meelgaarka wexey ku xirantahay dhowr wax. Koow adiga waa inaa haysatid ruqsad ansaxsan. Taasna micnaheeda waxeytahay haddii ruqsada degnaanshada aad haysatay wakhtigeeda uu dhacay iyo adiga soo codsatay in ruqsada laguu dheereyo, waa qasab in Hey’adda socdaalka koow go’aamiso haddii aad xaq u leedahay ruqsad aad ku sii joogtid Iswiidhan. Kuma filna in adiga baahi u qabtid difaac iyo in adiga horey u haysatay ruqsad degnaansho.
Marka Hey’adda socdaalka ey xaqiijiso inaa haysatid ruqsad degnaansho ansaxsan, markas baa baritaan ku suubin codsiga ruqsada qoyskaada. Hey’adda socdaalka waxey koow ka bilaabi haddii ey u badantahay in laguu dheereyn doono ruqsada degnaanshada. Markii la hubiyo iney u badantahay in laguu oggolandoono ruqsada degnaanshada oo muddo dheer bey Hey’adda socdaalka baari iyo qiimeyn codsiga qoyskaada iyo fiirin haddii aad fulineysiin shuruudaha kale oo quseyso dadka dooni iney Iswiidhan usoo guuran.
Dadka oo qoyskaada kamid ah kaliya baa kuu soo guuri karo haddii aad haysatid ruqsada degnaanshada ku meelgaarka
Dadka qoyskaada kamid ah waxaa laga wada ninkaada, xaaskada, labada qof ey u diwaangalisantahay iney isla noolyahiin ama labada qof oo isla nool, carruurtaada oo ka yar 18 sano. Haddii adiga aad ka yartahay 18 sano waalidkaada waxey kamid yahiin qoyskaada. Marmar oo dhif ah bey suurtagal tahay in dad aan qoyskaada kamid eheen loo oggolaado ruqsad, tusaale ahaan canug 18 sano ka weyn. Arrintan waxey quseysa adiga oo haysto ruqsad degnaansho ku meelgaar oo magangelyodoon ama baahi u qabo difaacid, ama la siiyay ruqsad degnaansho ku meelgaar oo sabab u tahay in la tarxiilikarin ama sababo kale oo qaas.
Xeerka waxaa ku qoran ineysan suurtagal eheen in labo qof oo dhawaan saaxiibay (oo dad aan guur eheen ama isla nool) in la siiyo ruqsad degnaansho haddii qofka Iswiidhan ku nool haysto ruqsad degnaansho ku meelgaar. Laakin waxaa jiro xaalado qaas ey suurtagal tahay iney midooban labo qof oo horey isla soo noolan. Markas shuruuda waa in qofka Iswiidhan joogo loo go’aamiyay inuu yahay qaxooti magangelyodoon ama baahi u qabo difaacid, ama la siiyay ruqsad degnaansho oo sabab u tahay in la tarxiilikarin ama sababo kale oo qaas, iyo inaa caddeynkartin inaa tahiin labo qof oo nolol rasmi dhaxeyso oo wadankii hooyo ku soo bilaawdeen, laakin aadan helin fursad aad kuwada noolatiin wadankii hooyo. Arrintan waxey fursad u noqon labada qof oo isku jinsiga ah oo eysan u suurtagalin iney ku wada noolaadan wadankii hooyo, iney Iswiidhan ku midooban.
Qoyskaada waxaa la siin ruqsad degnaansho oo muddo labo sano ah, ama ilaa inta ey ansaxsantahay ruqsada aad adiga haysatid. Tusaale ahaan haddii adiga haysatid ruqsad degnaansho oo ansaxsan ilaa muddo shan bilood, qoyskaada waxaa markas la siin ruqsad degnaansho oo shan bilood ah. Qoyskaada waxey soo codsankaran ruqsad degnaansho oo joogto markey Iswiidhan ku noolaadan ugu yaran saddex sano oo ruqsad degnaansho haysteen.
Haddii aad heshid ruqsada degnaanshada joogtada markas qofka aad nolosha wadaagtiin wuu soo codsankara ruqsad degnaansho siduu kugu soo guuro Iswiidhan.
Inta ka akhriso shuruudaha laga dooni qofka rabo ruqsad oo qorsheyn inuu guursado ama qof nolol la bilaabo (oo af ingiriis)
Haddii aad xaq u leedahay qoys midoobid waxaa suurtagal ah in shuruuda is masruufida ey waajib kugu tahay. Taasna micnaheeda tahay waa qasab inaa adiga ku filantahay is masruufida noloshada iyo tan qoyskaada. Waa qasab in adiga aad haysatid guri weyn oo ku filan adiga iyo dadka kula noolan markey Iswiidhan usoo guuran.
Shuruuda is masruufida ma ku quseyso haddii adiga tahay qaxooti ama dadka baahida u qabo difaac, iyo qoyskaada soo codsadan ruqsada degnaanshada saddex bilood gudaheeda laga bilaabo maalinta aad heshay go’aanka ruqsada ama darajada inaa tahay qaxooti ama baahi u qabtid difaac.
Inta ka akhriso waxa ey tahay shuruuda is masruufida iyo dadka ey quseyso (oo af ingiriis)
Aad bey muhiim u tahay inaad codsiga wakhtigiisa soo gudbisan
Sidaa iskaga hubisid in codsigii sida ugu dhaqsaha badan nagu soo gaaray waa inaa codsiga ka soo suubisid internetka oo adiga usoo codsatid qoyskaada. Haddii adiga u suubineysid codsiga qoyskaada oo wakiilka qoyska tahay, waxaad u baahantahay xilsaarasho wakiil. Hay’adda laanta socdaalka markey diwaangaliso codsigiina waxey qoyskaada kula talin iney wakhti ka ballansadaan safarad iswiidhish.
Waa maxay xilsaarasho wakiil?
Tag bogga internetka oo laga soo codsado ruqsadda deggenaanshada oo qoyskaada
Inta ka akhriso sidaa qoyskaada ugu soo codsankartid ruqsadda deggenaanshada
Iska hubi codsiga
Markuu qofka qoyskaada kamid ah soo gudbiyo codsiga asaga ama ayada waxaa la siin lambarka arrinta (lambarka dacwada). Adigoo lambarkaas adeegsaneysid baa iska hubin kartaa haddii Hay’adda laanta socdaalka codsiga ey diwaangalisay ama go’aan ka gaartay.
Lacagta kaalmada oo kharashka safarka oo ehelka Iswiidhan imaan
Adiga haddii lagu siiyay ruqsada degnaanshada oo qooxi ahaan waxaa soo dalbankarta lacagta kaalmada oo kharashka safarka ehelkaada oo Iswiidhan imaan.
Lacagta kaalmada oo kharashka safarka waxey quseysa ehelkaada aad la nooleed inta aadan Iswiidhan imaan iyo oo ah
ninkaada, xaaskaada ama qof nolol idinka dhaxeyso
carruurtaada (haddii ey wali guursan iyo 20 sano ka yar yahiin).
Haddii aad dooneysid inaa soo codsatid lacagta kaalmada waa qasab inaa adiga ruqsada degnaanshada lagu siiyay ey tahay mid qooxotinimo sida oo dhigi wada heshiinta Genève sanadka 1951 iyo kamid tahay kooxda haysto darajada AF ama A3. Adiga waa soo codsankarta haddii aad tahay falastiini oo muwaadinimo haysan iyo haysto baasaboorka safarka ama qiimeynta qooxoti.
Waa qasab in ehelkaada loo oggolaaday ruqsada degnaanshada oo iswiidhan iyo haystan baasaboor ansaxsan inta aadan soo dalban lacagta kaalmada.
Adiga ma heleysid lacagta kaalmada haddii aad tahay muwaadin iswiidhish ama ehelkaada ey iska bixin karan kharashka safarka.
Lacagta kaalmada waa hal tigid oo diyaarad qofkiiba oo wadanka ey joogan ilaa Iswiidhan.
Codsiga oo lacagta kaalmada oo kharashka safarka Iswiidhan oo ehelka dadka qoxootiga[Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar], foomka 4452 (luqada iswiidhishka) Pdf, 136 kB, opens in new window.
Codsiga usoo dir:
Rafcaan kama qaadankartid
Adiga rafcaan kama qaadankartid go’aanka Hey’adda socdaalka.
Qaraarka dawlada (1984:936) oo lacagta kaalmada oo dadka qoxootiga kharashka safarka ehelka Iswiidhan imaan (luqada iswiidhishka) External link, opens in new window.